५ हजार वर्ष पुरानो मनुस्मृतिमा आधारित जातिय कुराको कुनै महत्व छैन अहिलेको सभ्य समाजमा –लीलानाथ श्रेष्ठ
‘‘लीलानाथ श्रेष्ठ ’’ यो नामको पछाडी धेरै उपमा जोडिएको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य , सिरहा जिल्लाका हस्ति , जनसेवक , लोकप्रीय नेता , बिकासवादी नेता , ईमान्दार नेता , सहिष्णु नेता , विपक्षीहरुलाई पनि संरक्षण प्रदान गर्ने नेता आदि आदि ... । यी उपमाहरु त्यसै जोडिएका होईनन् । त्यसका लागि जीवनको उर्जाशिल समयको लगभग ४० वर्ष श्रेष्ठले जनताको सेवामा र राजनितिमा खर्चिएका छन् । उनको जीवन पुरै सार्वजनिक कार्यकोलागि समर्पित छ । घुस खाने नेता जताततै वग्रेल्ती भेटिन्छ । नेताले घुस खायो भने आश्चर्य हुँदैन । तर घुस नखाने नेता विरलाकोटीमा एक हुन्छन् । फलानो नेताले घुस खाँदैन भन्दा वरु आश्चर्य लाग्छ । तर आश्चर्य होईन सत्य हो लीलानाथ श्रेष्ठले कहिल्यै कसैसंग घुस खाएनन् । जिल्ला बिकास समिति सिरहाको उपसभापति हुँदा उनले जिविसको रकमवाट एक कप चिया पनि नखाएको उनका सहपाठीहरु र विपक्षीहरुले पनि बताउँछन् । उनको यही ईमान्दार छविका कारण उनी सिरहा जिल्लामा विख्यात छन् । सिरहाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दु भएका छन् ।
भनिन्छ , कहिले माझी हुन्छ तर यात्रु आउँँदैनन् । कहिले यात्रु आउँछन् तर घाटमा माझी हुदैन । कहिले यात्रु र माझी दुवै हुन्छ तर नदीमा बाढी आएर अर्को घाट उत्रिन सक्दैन । घाटमा डुङ्गा लिएर माझी हुनु , यात्री आउनु , डुङ्गामा सवार भएर सुरक्षित अर्को घाटमा पार हुनु एउटा ठुलो संयोग हो । यस्तै संयोग यस पटक सिरहामा मिलेको छ । चुनाव आयो , वाम गठबन्धन बन्यो र सिरहाका भविष्य कोर्ने लोकप्रीय नेता लीलानाथ श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभाका लागि क्षेत्र नंं. ३ वाट उम्मेदवार बन्नु एउटा ठुलो संयोग हो । सिरहाली जनताका लागि बिकासको ढोका खोल्ने र एक होनहार र ईमान्दार नेताको हातमा नेतृत्व सुम्पिने यो ऐतिहासिक अवसर र मौका हात परेको छ । यहीवाट सिरहाको बिकासको रुपरेखा कोरिन आरम्भ हुन्छ । यो चर्चा आज सर्वत्र छाएको छ ।
उनै लीलानाथ श्रेष्ठ ( सिरहा क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उममेदवार ) संग अनुकल्प दैनिकका सम्पादक अर्जुन थपलियाले गरेको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
प्रश्न ः निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभयो , जित्ने आधारहरु के छ त ?
सिरहा जिल्लामा मेरो जित मात्र होईन प्रतिनिधि सभाका ४ सिट र प्रदेश सभाका ८ सिट सवैमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको जित अवस्वयंभावी छ । सुनिश्चित छ । सिरहाले यस पटक वाम गठबन्धनलाई जिताएर एक नविन इतिहासको रचना गर्दैछ । सिरहा जिल्लाको बिकासका लागि एक नविन द्वार खोल्दैछन् ।
जित्ने आधारहरुलाई केलाएर हेर्नुस् , विश्लेषण गरेर हेर्नुस् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै एमालेले ३ नं. क्षेत्रमा लगभग २० हजार मत ल्याएको छ । माओवादी केन्द्रले १२ हजार मत ल्याएको छ । यो दुवै पार्टीको संगठित मत हो । यसमा दायाँ वायाँ हुदैन । सवैलाई थाहा छ , विपक्षीहरु पनि जान्दछन् कम्यूनिष्टहरुको संगठित मत भडकाउन सकिन्न । दुवै पार्टीको मत जोडदा ३२ हजारको आँकडा पार हुन्छ । यस वाहेक अहिले हामी ३ जना नै सशक्त वाम उम्मेदवारहरु मैदानमा छौ । प्रदेश क मा पुराना कम्युनिष्ट नेता कमरेड राम कुमार यादव , प्रदेश ख मा सिरहा क्षेत्रमा मजवुत पकड भएका कमरेड प्रमोद यादव उम्मेदवार हुनुहुन्छ । म प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवार छु । हाम्रो ईमान्दारिता, सक्षमता र जनसेवी चरित्र हेरेर पनि धेरै मत थपिन्छ । यो परिस्थितिको साकारात्मक मोडलाई हेर्दा हामी ४० हजारको हाराहारीमा मत ल्याउँछौं । जुन मत जितको लागि पर्याप्त मात्र हुँदैन विपक्षीहरुलाई होस उडाउन पनि काफी हुन्छ । अर्नामाको वाम गठबन्धनको मत अरु भन्दा दोव्वर छ । नरहामा एमाले र माओवादीको मत जोडदा हामी धरै अगाडी हुन्छौ । गोलवजार नगरपालिकामा पनि माओवादी र एमालेको मत मिसाउँदा अरु भन्दा तेव्वर मत हाम्रो हुन्छ । विष्णुपरको पूवी भागमा वाम पकड नै मजवुत छ । रह्यो सिरहा नगरपालिका । त्यहाँ पनि स्थानीय निकायको चुनावको मत परिणामलाई हेर्दा माओवादी र एमालेको मत जोड्दा अन्य विपक्षी भन्दा २ हजार मत बढी हुन्छ ।
वाम गठबन्धन बने पछि पुरै राष्ट्रमा एउटा सशक्त संदेश गएको छ । जनता उत्साहित छन् । वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । एमाले र माओवादी दुवै पार्टीमा प्रवेशको लहर चलेको छ । पुरै राष्ट्रको कायाकल्प हुने आशामा जागेको छ जनतामा । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस पुरातनवादी शक्तिसंग जनताको मोह भंग हुने क्रममा छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि सिरहामा जनताले दिएको परिणामलाई हेर्दा पुग्छ । कांग्रेसले त यो क्षेत्रमा औपचारिकता पुरा गर्न मात्र उम्मेदवारी दिएको हो । यो कुरा क्षेत्रका जनतालाई राम्रैसंग अनुभुति भएको छ । ३ नंं क्षेत्रको प्रदेश ख मा हेर्नुहोस् । एक महिना अगाडी चुनाव हारेका सितादेवी यादवका छोरालाई पुन उम्मेदवार बनाएका छन् । उनले कमरेड प्रमोदलाई टक्कर दिनै सक्दैनन् । मधेसवादी दलहरु प्रति पनि जनता आस्वस्त छैनन् । मधेसवादी दलहरुले गुमेको साख उठाउन कुनै नयाँ काम गरेका छैनन् । फगत एक मात्र जातिय नारा दिएर चुनाव जित्ने दिवास्वप्न देख्दैछन् । तर जनता जातिय आधारमा जाँदैनन् । राजनितिक सिद्धान्त, विगतका कृयाकलाप , नेताको चरित्र , सक्षमता र योग्यतालाई हेर्छन् । राष्ट्रिय राजनितिको दिशा र दशालाई हेर्छन् ।
अर्को कुरा यो वाम क्षेत्र हो । अर्नामा देखि उत्तर तर्फ त वामहरुको स्वतः वाहुल्यता छ । दक्षिण तिर पनि हाम्रा महान कमरेड स्वर्गिय हेम नारायण यादवको कर्मभूमि हो । सिरहा नगर भित्र पनि एमालेको मजवुत संगठन र विपुल मत भण्डार छ । यी सवै आधारमा हामीले जित्ने पक्कापक्की छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो जित निश्चित छ । ४ नंं मा युवा कम्यूनिष्ट नेता अजय शंकर नायकको प्रतिस्पर्धामा कोही उभिन सक्दैन । त्यहाँ उनको विपक्षी सर्वाधिक मौका परस्त नेताको रुपमा वदनाम छन् । गत संविधानसभामा जनताले उनलाई जमानत जफ्त हुने स्थितिमा झण्डै पुर्याएका थिए । खस्केको जनमत उठाउने कुनै काम उनले गरेका छैनन् अनी कसरी अजय शंकर नायकसंग प्रतिश्पर्धा गर्छन् उनले ? दुई नं. क्षेत्रमा सुरेशचन्द्र दास वान म्यान आर्मी जस्तै हुन् । उनी एक्लै पनि चुनाव जित्ने सामथ्र्य राख्छन् भने सिंगो वाम गठबन्धन उनको साथमा छ । उनी पनि भारी बहुमतले जित्छन् । क्षेत्र नंं १ मा त झन वाम शक्तिको स्वत जितको दमहा बज्ने वाला छ । लोकप्रीय कमरेड गंगा प्रसाद यादव वाम गठबन्धनका कारण र लगन लाल चौधरीको एमाले प्रवेशवाट जितको संघार मै छन् । उनका प्रतिस्पर्धीलाई हेभी वेट भनिए पनि हाम्रा लागि उनी त्यति भारी व्यक्तित्व होईनन् । हिजो मिर्चैया क्षेत्रवाट हामीले उनलाई करारी हार दिएकै हो । इतिहास पुन दोहरिन्छ । गंगा प्रसाद यादवले जितेर राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा नाम दर्ज गराउनु हुने छ । त्यसैगरी प्रदेश सभामा पनि ८ वटै सिट हामीले जित्ने छौ । जित्न पनि आवश्यक छ । १२ सिट नै जिते पछि हामी यहाँ बिकासका लागि गुजरात मोडेल भने जस्तै बिकासका लागि सिरहा मोडेल प्रस्तुत गर्नेछौं ।
प्रश्न ः तपाईहरुले जितेपछि सिरहामा बिकास कार्यलाई कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ?
बिकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन र वृद्धिको एक गतिशिल प्रकृया हो । बिकास कार्य जनतावाट सुरु हुन्छ । जनताकै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ । यो एक पटक आउने खहरे खोलाको बाढी होईन । यो सतत् हुन्छ । अविच्छिन्न हुन्छ । निरन्तर हुन्छ । गतिमान हुन्छ । बिकास दान होईन जनताको अधिकार हो । नेता र राजनैतिक दलहरुले ठान्दछन् जनता उपभोक्ता हुन् । तर हैन जनता नागरिक अधिकारले संपन्न छन् । नेपालमा बिकास बाँड्नेहरुको जीवन फेरियो तर बिकास थाप्नेहरुको जीवन फेरिएको छैन । त्यसको प्रमुख कारण हो बिकास अधिकारको रुपमा स्थापित भएको छैन । बिकासलाई जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
म सिरहाको अभिभावक नेताको रुपमा भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने कुरामा सचेत छु । मैले मात्र ३ नंं क्षेत्रको विकासलाई हेरेर पुग्दैन । पुरै सिरहा जिल्लाको कुना काप्चामा मेरो नजर पुग्नुपर्छ । म एमालेको जिम्मेवार र केन्द्रीय स्तरको नेता हुँ । सम्पूर्ण सिरहा जिल्लावासीसंग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ । जिल्लाको कुना कुनावाट म नजिक जनता आउँछन् । मैले पुरै जिल्लाको लागि राजनीति गरेको छु । स साना परियोजनाहरुको उल्लेख गरेर साध्य छैन । यद्यपी हामी साना परियोजनालाई पनि महत्व दिन्छौ तर समग्र सिरहाको विकासका लागि गर्नु पर्ने मुख्य मुख्य कार्यहरु म टिपाउँछु ।
सर्वप्रथम चार राष्ट्रिय स्तरको योजना तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ । कोशी कमला वाटर वे । कोशीको पानी कमला र वागमतिसम्म नपुरयाउँने हो भने यस क्षेत्रको आर्थिक सवलता र उन्नति संभव छैन । मैले जितेर शपथ खाएको भोली पल्ट देखि यो कार्यको लागि प्रयाश केन्द्रीत गर्नेछु । कृषकको हातमा पानी दिनासाथ कृषक स्वयंले आर्थिक समृद्धिको नक्शा कोर्ने छन् । यसवाट दुई वटा कार्य पुरा हुनेछ । खानेपानी र सिंचाई दुवै समस्या सामाधान हुने छ । राजमार्ग देखि उत्तर भूमिगत जल सतह तल भासिएकोले अव ईनार र वोरिङ्गवाट पानी खुवाउन सकिन्न । वाटर वे निर्माण गर्नु नै दीर्घकालिन समाधान हो । वैदेशिक रोजगारमा गएका सिरहाका ९९ हजार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उपाय पनि यही हो । कृषिको आधुनिकिकरणवाट नै हामीले युवालाई सिरहामै स्वरोजगार बनाउन सक्छौ ।
अर्को मुख्य योजना हुलाकी सडक । ४ लेनको हुलाकी सडक निर्माण २ वर्ष भित्रै संपन्न गराउन कुनै कसर बाँकी छोडिने छैन । हुलाकी सडक निर्माणले सिरहा लगायत मधेसको कायाकल्प गर्ने छ ।
अर्को योजना सिरहा जिल्ला भित्रका मुख्य मुख्य साहायक सडकहरुको कालोपत्रे गर्ने कार्य हुने छ । लहान भगवानपुर, सडक सल्हेश फूलवारी सितपुर सडक, धनगढी महेशपुर पतार सडक, जिरोमाईल वरियारपट्टी सडक, कसहा औरही सडक, जमदह मुक्सार लगडी गदियानी सडक, चोहर्वा खयरटोका सडक ४ लेन , मिर्चैया कल्याणपुर सिरहा सडक र वस्तिपुर कर्जन्हा सिरहा सडकलाई दुई लेनको पिचिङ्ग गर्ने योजना संपन्न गरिने छ । अन्य ग्रामिण सडकहरुको स्तरोननति गरिने छ । जिल्लाभरमा नयाँ ३ सय किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिने छ ।
अर्को योजना राजमार्ग देखि उत्तर तर्फ रहेका लगभग २४ गाविसहरुमा तत्कालै २४ वटा ओभर हेड पानी टंकीको निर्माण गरी खानेपानी समस्यावाट मुक्त बनाईने छ ।
अर्को मुख्य योजना जनता आवास कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रम मार्फत ५ वर्षमा सिरहाका हरेक दलित र गरीव परिवारलाई घर निर्माण गरिने छ ।
सिरहाका ८ नगरपालिकालाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्न सडक , पानी ,वत्ती , नाला , ढल , जस्ता आधारभूत संरचना तयार पारिने छ । सिरहा नगरपालिकाको आधुनिकिकरणका लागि वृहत् गुरु योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
जिल्लामा कम्तीमा २ दर्जन नयाँ ठुला उद्योग स्थापना गरी एक लाख युवाहरुको लागि रोजगारी श्रृजना गरिने छ । कुनै पनि युवाले स्वरोजगार हुन २ लाखसम्म ऋृण विना व्याज र विना धरौटी प्राप्त गर्ने कार्यक्रम ल्याईने छ । कमला तटबन्धलाई मजवुत तथा संभार गरिने छ । लामी डाँडा एयरपोर्टलाई तीन वर्ष भित्र पुरा गरिने छ । सिंचाईका लागि १० जना कृषकको समूह बनाई एक पावरड्रिल वोरिङ्ग प्रदान गरिने छ । जिल्लाको कुनै घर पनि विजुली विहिन हुने छैन । वलान नदी नियंत्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिने छ । पशुपालन , माछा पालन , कुखरा पालन जस्ता व्यावशायलाई उद्योगको रुपमा विकसित गरिने छ । एक सुविधा संपन्न अस्पताल सिरहाको आवश्यकता हो । त्यसलाई पनि पुरा गरिने छ ।
यी त भए मुख्य मुख्य बिकास कार्य । अव स साना बिकासका कामहरु न्गरपालिका र गाउापालिका मार्फत पनि संचालन गरिने छ ।
प्रश्न ः तपाई पहाडे समुदायको मानिस मधेसमा कति रचाउँछन् तपाईलाई ।
अव मनुस्मृतिको आधारमा चल्ने समाज छ र ? जात पात र नश्ल र मनुको पालामा ५ हजार वर्ष अगाडी थियो । जातिवाद विज्ञानसम्मत कुरा होईन । राजनितिमा जात र नश्ल हेरिदैन । म चुनौति दिन्छु जातिय कुरा गर्नेहरुलाई । म दक्षिण मधेसमा जान्छु । जातिय कुरा गर्नेहरु पनि आउन् । मेरो पछाडी मधेसी जनता बढी धुईरिन्छन् की उनीहरुको पछाडी ? तिनले हेरुन । म सिरहा नगरपालिकामा भ्रमण गरिरहेको छु । आमसभा कोण सभा गर्दैछु । हजारौ हजार जनता मसंग झुम्मिन आईरहेका छन् । राजनितिमा नेता कुन जातको हो भनेर हेर्ने होईन , नेता कुन कित्तामा उभिएको छ भनेर हेर्ने हो । कस्तो चरित्रको छ भनेर हेर्ने हो । मधेसमा मधेसीहरु माझ मधेसवादी दलका नेताहरु भन्दा म प्रीय छु । किनकी म विज्ञान सम्मत राजनितिमा भरोसा राख्छु । जनताको सेवा तल्लिन छु । मेरो पनि यहाँ ६ पुस्ता वितेको छ ।